Pakistan: Ny Bilaogin’ny fiakaran’ny maripana · Global Voices teny Malagasy
Pakistan: Ny Bilaogin'ny fiakaran'ny maripana
Voadika ny 13 Aogositra 2018 3:23 GMT
Nila ny hery rehetra azoko nangonina aho nahafahako nanao ity lahatsoratra ity. Indrisy, nandritra ny herinandro vitsy lasa, tratry ny andro ratsy aho. Am-pahatsorana, tahaka ny toetr'andro fiakaran'ny maripàna izany. Nitsonika ny satroko tsy tantera-katsiaka, ka niteraka fahatsembohana be dia be, vokatr'izany, very lanja aho, izay mahagaga fa nitondra ahy ho very 378 livra.
Mino aho fa tratry ny sery aho. Tsia, tsy karazana H1N5 izany fa viriosy H2MKFC (Had too much Kentucky Fried Chicken na Nihinana Akoho Natono Kentucky be loatra). Tena ilaiko izany noho ny fihinanako sakafo tsy ara-pahasalamana sy tafahoatra eny amoron-dalana. Tsy hamerina intsony!
Ao anatin'ny faharefoko, nitety toerana cyber aho mba hitondra angona lahatsoratra mahaliana avy amin'ny bilaogy Pakistaney ho anao. Ankafizo.
Chapati Mystery manasongadina ny fetibe Noruz; Suspect Paki mampahafantatra ny hatezerany momba ny Demaokrasia; The Fountainhead mamoaka lahatsoratra tonga lafatra momba ny lohahevitra tena lehibe; Teeth Maestro mandehandeha amin'ny alalan'ny fanovana tranonkala fampiantranoana; Lightwithin mamaly ireo fanontaniana momba ny lohahevitry ny bilaogy Pakistaney; ary farany, nalaiko sary an-tsaina izay lahatsoratra AMIDY raha nanao dokambarotra ao amin'ny E-Bay ny Trano Fotsy. (Tsy nampoizina, nahazo mpamaky marobe ity lahatsoratra ity satria nalain'ireo tranonkalam-baovao marobe hafa – dokambarotra tsy mahalala menatra)
Ny asa mafy tamin'ny fanoratana ity lahatsoratra ity no nahatonga ahy ho noana tanteraka, ka nankany amin'ny McDonalds aho mba handrapaka Big Mac 8, frity lehibe 4 ary sakafo tsara 3 (fantatra amin'ny lanjany ara-tsakafo).